Dooni ganacsi oo ku socotay Hobyo oo ku degtay biyaha Badweynta Hindiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDooni ganacsi oo ku socotay Hobyo oo ku degtay biyaha Badweynta Hindiya
February 15, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Dooni ganacsi oo ku socotay Hobyo oo ku degtay biyaha Badweynta Hindiya. [Sawirka: Archive]
Dubai-(Puntland Mirror) Dooni ay saarnaayeen alaabo ganacsi ayaa lagu soo waramayaa in ay ku degtay Badweynta Hindiya.
Doonida ayaa ka timid dalka Isutaga Imaaraatka Carabta oo ay alaabaha ganacsiga ka soo qaatay waxayna ku socotay dekad macmal ah oo laga sameeyay degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Alaabaha ganacsi ee ay doonidu siday waxaa kamid ahaa gawaari, shidaal iyo waxyaabo kale oo ganacsi, kuwaasoo ay lahaayeen dad ganacsato ah oo kasoo jeeda deeganada Galmudug.
Qeyb kamid ah shaqaalihii doonida saarnaa ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu samatabixiyay Markab dagaal oo aan la aqoon cida leh oo joogay biyaha Badweynta Hindiya.
Lama oga sababta rasmiga ah ee keentay in doonidu ay degto balse ilo-wareedyada ayaa sheegaya in ay ku timid cild kaga timid mawjadaha dabaylo ah oo badda ka dhacayay.
Sanad walba dhowr doonyood oo u raran ganacsato Soomaaliyeed ayaa ku dega Biyaha Badweynta Hindiya iyo Badda Cas, waxanaa ku luma alaabo ganacsi oo lagu qiyaasay tobonaan malyan.
January 21, 2017 Madaxweynihii hore ee Puntland ahna murashax u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole oo tagay Muqdisho
October 25, 2016 Qaramada Midoobay oo sheegtay in colaadaha Gaalkacyo ay ku barakaceen dad ka badan 75,000
Fierce fighting between Galmudug militias and Al-Shabab erupts in Mudug region
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiiradii Arrimaha Insaanimada iyo Maareynta Musiibooyinka ee Soomaaliya, Dr. Maryan Qaasim Axmed ayaa maanta oo Arbaco ah si deg deg ah isku casishay, iyada oo sheegatay daruufo gaar ah, sida ay ku sheegtay [...]
Baarlamaanka dowladda Puntland oo meelmariyay miisaaniyada 2019
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda Puntland ayaa maanta oo Axad ah meelmariyay miisaaniyada 2019, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka. 38 xildhibaan ayaa u codeeyay ansixinta miisaaniyada, mid ayaa diiday, hal ayaa ka aamusay, sida uu ku [...]
Mareykanka oo cadeeyay in hoggaamiye ku xigeenkii maleeshiyada ISIS lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Bari
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa cadeeyay in hoggaamiye ku xigeenkii maleeshiyada ISIS lagu dilay duqeyn diyaaradeed. “Iyada oo lala kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya ee dadaalkeeda ku aadan in la dhimo dhibbaatada ururada argagixisada, [...]